ရှယ်စုဘူး + JOOX + VIU | Telenor Myanmar
အင်တာနက်ဒေတာလည်း သုံးချင်တယ်… သီချင်း နားထောင်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရတာကိုလည်း ခုံမင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ “ရှယ်စုဘူး” ပတ်ခ်လေးက သင် လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဒေတာ ၁GB
JOOX သီချင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၂,၂၉၉ကျပ်တန် JOOX VIP
VIU ရုပ်ရှင်ကြည့်အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၅,၀၀၀ကျပ်တန် VIU ပရီမီယမ်
ရက် ၃၀ စာအတွက် သုံးမျိုးပေါင်းကိုမှ ၁,၄၉၉ ကျပ်တည်းသာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Shal Suboo 1GB + JOOX VIP + VIU Premium
အထက်ပါ အစီအစဉ်ကို MyTelenor အပက်လီကေးရှင်းမှာလည်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက် အင်တာနက် အသုံးပြုဖို့ ဒေတာ ၁GB
ဖော်ပြထားတဲ့ JOOX နဲ့ VIU အက်ပလီကေးရှင်းများအပြင် မိမိစိတ်ကြိုက်ရက် ၃၀အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဒေတာပမာဏ ၁GB
သုံးမကုန်တဲ့ဒေတာများလည်း နောက်တကြိမ်ဝယ်ယူသည် အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာပါ။
JOOX သီချင်း အက်ပလီကေးရှင်း၏ VIP ခံစားခွင့်များရရှိလာသောအခါ
သီချင်းများအား မိမိနားဆင်လိုသည့် တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဖွင့်ထားနိုင်ခြင်း
သီချင်းများကို အကန့်အသက်မရှိ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားကာ အင်တာနက်မလိုဘဲ ပြန်လည်နားဆင်နိုင်ခြင်း
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံအရည်အသွေးနဲ့အတူ Hifi Sound Quality ကိုပါ ရရှိခြင်း
Viu ရုပ်ရှင်ကြည့် အက်ပလီကေးရှင်း၏ ပရီမီယမ်ခံစားခွင့်ရရှိလာသောအခါ
Viu အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအားလုံးနှင့် တီဗွီအစီအစဉ်များအားလုံးကို ဇာတ်ကားဖိုး အစီအစဉ်ဖိုးပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက “JOOX Myanmar Facebook Page” တွင် ၀င်ရောက် မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“ရှယ်စုဘူး” ပတ်ခ်အား ရယူပြီး
JOOX VIP ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
၁။ ပတ်ခ်ဝယ်ယူပြီးမကြာမီအတွင်း SMS ကတဆင့် JOOX VIP ရဲ့ ကုဒ်နံပါတ် ၂မိနစ်ခန့်အတွင်း ရရှိပါလိမ့်မယ်။
၂။ ၄င်း JOOX VIP ကုဒ်နံပါတ်ကို Copy ကူးယူထားပါ။
၃။ ထို့နောက် JOOX အက်ပလီကေးရှင်းကို ဖွင့်ပါ။
၄။ အက်ပလီကေးရှင်း အပေါ်ဘယ်ဘက်ဘေးထောင့်ရှိ မိမိ Profile ပုံရှိရာကို နှိပ်ပါ။
၅။ စိန်တုံးပုံစံ Icon ဘေးမှ “စာရင်းသွင်းခြင်းအကျိုးကျေးဇူး” ကို နှိပ်ပါ။
၆။ အောက်ဘက်သို့ဆွဲချလိုက်ပြီးသည့်အခါ “Redemption Code” နေရာကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။
၇။ ကုဒ်ရိုက်ထည့်ရမည့်နေရာတွင် မိမိ SMS က တဆင့် Copy ကူးယူလာခဲ့သော VIP ကုဒ်နံပါတ်ကို Paste လုပ်ပြီး “ထည့်သွင်းရန်” ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ပျော်ရွှင်စွာ JOOX VIP ကို ခံစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ (ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပြီးသော်လည်း JOOX VIP အဖြစ် ချက်ခြင်းပြောင်းသွားမည် မဟုတ်ဘဲ အချိန် အနည်းငယ် စောင့်စားရနိုင်ပါတယ်။)
အာရှရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ၁၀၀%ပြည့်မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ကြည့်ရှုဖို့ဆိုရင် Viu ကသင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်မွန်ပါ။ ဇာတ်ကားအားလုံးကို စိတ်ကြိုက်ရုပ်သံအရည်အသွေးရွေးချယ်ပြီးတိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်သလို ဒေါင်းလုဒ်လည်း လုပ်လို့ရတယ်နော်။
အက်ပလီကေးရှင်းအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက “Viu Myanmar Facebook Page” တွင် ၀င်ရောက် မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယင်း “ရှယ်စုဘူး”ပတ်ခ်ကို ရယူပြီး VIU ပရီမီယမ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
* ပတ်ခ်ဝယ်ယူပြီးမကြာမီအတွင်း ရယူခြင်းအောင်မြင်ကြောင်း SMS ရရှိပါလိမ့်မယ်။
* ထို့နောက် VIU အက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ ၀င်ရောက်ပြီး VIU ပရီမီယမ်ကို စတင်ခံစားနိုင်ပါသည်။ (VIU အက်ပလီကေးရှင်းကို အရင်ဖွင့်ထားပါက ပိတ်ပြီးမှ ပြန်ဝင်ဖို့ အကြံပြုအပ်ပါတယ်။)
* ယင်းဒေတာပတ်ခ်ကို ဝယ်ယူထားသာ ဖုန်းနံပါတ်၏ အင်တာနက်ကွန်ယက်ပေါ်မှတဆင့် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြား Wifi စတဲ့ ကွန်ယက်များဖြင့် ခံစားလို့မရပါ။
* အက်ပလီကေးရှင်းအနေဖြင့် အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး iOS အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ www.viu.com မှတဆင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ရှယ်စုဘူးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင် ‘ဒီမှာ’ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီပတ်ခ်က အခြား ရှယ်စုဘူးပတ်ခ်တွေနဲ့ ဘာကွာလဲ?
အင်တာနက်ဒေတာလည်း သုံးချင်တယ်… သီချင်းနားထောင်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုလည်း ခုံမင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ “ရှယ်စုဘူး” ပတ်ခ်လေးက သင် လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်ဖို့ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ဒီရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် ဘယ်လိုခံစားခွင့်တွေ ရရှိမလဲ?
ဒီဒေတာပတ်ခ်လေးကိုဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ ရက် ၃၀ အတွင်း မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အင်တာနက်ဒေတာ ၁GB ၊ JOOX သီချင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၂,၂၉၉ကျပ်တန် ရက် ၃၀စာ JOOX VIP နဲ့ VIU ရုပ်ရှင်ကြည့်အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၅,၀၀၀ကျပ်တန် ရက် ၃၀စာ VIU ပရီမီယမ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
*7199*1# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ လက်ကျန်ဒေတာများကို သက်တမ်းကုန်ပြီး ၇ရက်အတွင်း နှစ်သက်ရာ ရှယ်စုဘူး တစ်ခုအား ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ဆက်လက် သယ်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒီရှယ်စုဘူးကို အခြားရှယ်စုဘူးတွေနဲ့ တွဲဖက်ခံစားလို့ရလား?
ရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ၀ယ်ယူတဲ့ အင်တာနက်ဒေတာတွေဟာ မိမိရဲ့ စုစုပေါင်းဒေတာအဖြစ် ပေါင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တွဲဖက်ခံစားလို့ရပါတယ်။ ရှယ်စုဘူးအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင် ‘ဒီမှာ’၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် အန်းဒရွက်အတွက် “ဒီမှာ” ႏွင့္ iOS အတြက္ “ဒီမှာ” နှိပ်ပါ။
ဒီရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် JOOX ရဲ့ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာလဲ?
JOOX သီချင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၂,၂၉၉ကျပ်တန် ရက် ၃၀စာ JOOX VIP ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ JOOX သီချင်း အက်ပလီကေးရှင်း၏ VIP ခံစားခွင့်များရရှိလာသောအခါ
- သီချင်းများအား မိမိနားဆင်လိုသည့် တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဖွင့်ထားနိုင်ခြင်း
- ကြော်ငြာများ မပါရှိတော့ခြင်း
- သီချင်းများကို အကန့်အသက်မရှိ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ထားကာ အင်တာနက်မလိုဘဲ ပြန်လည်နားဆင်နိုင်ခြင်း
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံအရည်အသွေးနဲ့အတူ Hifi Sound Quality ကိုပါ ရရှိခြင်း
စတဲ့ ခံစားခွင့်တွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူပြီး JOOX VIP ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
အသေးစိတ် အဆင့်ဆင့်ကို Screenshot နှင့်တကွ ယင်း Web Page ၏ အပေါ်ပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
JOOX VIP ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ?
JOOX အက်ပလီကေးရှင်းထဲကိုဝင်၊ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်က Profile Picture ကို နှိပ် JOOX VIP ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလား စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပြီးသော်လည်း JOOX VIP အဖြစ် ချက်ခြင်းပြောင်းသွားမည် မဟုတ်ဘဲ အချိန် အနည်းငယ် စောင့်စားရနိုင်ပါတယ်။)
အက်ပလီကေးရှင်းကို ရယူရန် “ဒီမှာ” နှိပ်ပါ။
ဒီရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူထားရင် VIU ရဲ့ ဘယ်လိုခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာလဲ?
VIU ရုပ်ရှင်ကြည့်အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ၅,၀၀၀ကျပ်တန် ရက် ၃၀စာ VIU ပရီမီယမ် ကို ရရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Viu ရုပ်ရှင်ကြည့် အက်ပလီကေးရှင်း၏ ပရီမီယမ်ခံစားခွင့်ရရှိလာသောအခါ Viu အက်ပလီကေးရှင်းထဲမှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအားလုံးနှင့် တီဗွီအစီအစဉ်များအားလုံးကို ဇာတ်ကားဖိုး အစီအစဉ်ဖိုးပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဒီရှယ်စုဘူးပတ်ခ်ကို ရယူပြီး VIU ပရီမီယမ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
- ပတ်ခ်ဝယ်ယူပြီးမကြာမီအတွင်း ရယူခြင်းအောင်မြင်ကြောင်း SMS ရရှိပါလိမ့်မယ်။
- ထို့နောက် VIU အက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ ၀င်ရောက်ပြီး VIU ပရီမီယမ်ကို စတင်ခံစားနိုင်ပါသည်။ (VIU အက်ပလီကေးရှင်းကို အရင်ဖွင့်ထားပါက ပိတ်ပြီးမှ ပြန်ဝင်ဖို့ အကြံပြုအပ်ပါတယ်။)
- ယင်းဒေတာပတ်ခ်ကို ဝယ်ယူထားသာ ဖုန်းနံပါတ်၏ အင်တာနက်ကွန်ယက်ပေါ်မှတဆင့် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အခြား Wifi စတဲ့ ကွန်ယက်များဖြင့် ခံစားလို့မရပါ။
VIU ကို ဇာတ်ကားဖိုးအခမဲ့နဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဆိုတာ အင်တာနက်ဒေတာဖိုးနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲ?
ဇာတ်ကားဖိုးအတွက် သီးသန့်ပေးရတဲ့ ပရီမီယမ်ကြေးကို ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပြီး အင်တာနက်ဒေတာဖိုးကတော့ ကြည့်ရှုသည့် ပမာဏအတိုင်း ဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
VIU ပရီမီယမ် အသုံးပြုသူ ဖြစ်မဖြစ် ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ?
VIU အက်ပလီကေးရှင်းကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဘယ်ဘက် အပေါ်ထောင့်ရှိ Icon လေးကို နှိပ်ပါ။ ‘ကိုယ့်အကောင့်’ ဆိုတာကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။ ‘အစီအစဉ်’ ၏ အောက်တွင် “TELENOR” ဟု ပေါ်နေပါက Viu ပရီမီယမ်ခံစားခွင့်ကို ရရှိနေပါတယ်။ (ဘယ်နှရက် ကျန်သေးလဲဆိုတာကိုလည်း ဘေးဘက်တွင် တစ်ခါတည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)